Al-shabaab iyo Daacish oo dagaalkii ugu xumaa uu ku dhexmarayo gobolka Bari – Radio Daljir
Al-shabaab iyo Daacish oo dagaalkii ugu xumaa uu ku dhexmarayo gobolka Bari
Janaayo 28, 2019 7:56 b 1
Dagaal xoog badan oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kalle duwan ayaa ka socda deegaano hoos taga degmada Qandala ee gobolka Bari.
Dagaalka oo shalay subax qarxay ayaa ilaa iyo hadda socda waxaana uu u dhaxeeya dagaalamayaasha Al-shabaab iyo Daacish, deegaanka uu dagaalka uu ka socdo oo ah dhul buuro ah ayaa lagu magacaabaa Marshaad, waxaana 50km ay u jirtaa degmada Qandala ee gobolka Bari.
Lama oga waxa dagaalkan uu ku salaysanyahay, balse dagaalo hore ayaa jiray oo labada dhinac dhexmaray, kaasi oo gaystay dhimashada dad inka badan labaatan ka mid ah dhinacyada dagaalamay.
Dowladda Puntland ayaan wali ka hadlin dagaalkan.
Siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo Arrimo Xasaasi ah kaga hadlay Waraysi uu siyey Radio daljir (Daawo)
Cabdiraxmaan Cabdishakuur “Taageerayaashayda Puntland waa la xanibay” (Daawo)
Moha najka 1 year ago
Is dhameya anagana waanoo jaanis dhulkyag kaliya nooga bx
U Jawaab Moha najka Buri halceliska